အင်္ဂလိပ်စာ အမေးအဖြေကဏ္ဍ - Myanmar in Singapore
Posted by Admin Team on November 10, 2009 at 1:29am in လူမှုဘ၀နှင့် အထွေထွေ
Please share your knowledge, experiences and opinions...Blogs ထဲမှ အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ တွင် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး
Learning English Group တွင်လည်း ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ Tags: အမေးအဖြေကဏ္ဍများ Like0members like this
Permalink Reply by Jespper John on November 11, 2009 at 9:01pm What is the meaning of "Based on the information you have provided, you are unlikely to qualify for either an Employment Pass (EP) or an S Pass."
I have heart attack!!!!
Permalink Reply by Neo on January 17, 2010 at 9:54pm the meaning is ....you are so stupid to get EP or Spass. :)
Jespper John said:What is the meaning of "Based on the information you have provided, you are unlikely to qualify for either an Employment Pass (EP) or an S Pass." p.s
Permalink Reply by Aung Thu Linn on July 24, 2010 at 11:19am Ha Ha said:သင် ပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ သင် သည် EP နှင့် S pass နှစ်ခုစလုံးအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါ Jespper John said:What is the meaning of "Based on the information you have provided, you are unlikely to qualify for either an Employment Pass (EP) or an S Pass."p.sI have heart attack!!!!
Permalink Reply by Aung Thu Linn on July 25, 2010 at 12:27am Jespper John said:What is the meaning of "Based on the information you have provided, you are unlikely to qualify for either an Employment Pass (EP) or an S Pass." p.s
Permalink Reply by Bi Kare on September 16, 2010 at 3:25pm ဒီမှာ Eng သင်တန်း ( ပညာဒါနဘဲဖြစ်ဖြစ်..လခနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ) ရှိရင်တက်ချင်ပါတယ်..သိတဲ့လူများရှိရင်ပြောပြပေးပါ.
Basic Level တော့ရပါတယ်... Sing ရော Eng ပါ နှစ်မျိူးလုံး အားနည်းနေလို့ပါ.
Permalink Reply by Bi Kare on September 17, 2010 at 3:38pm ဘူမှလည်းမဖြေကြဘူး...အားငယ်လိုက်တာဟယ်..
Permalink Reply by KKM on September 19, 2010 at 9:54am http://158.132.164.193/CILL/exercises/default.htm
This is English learning website. You can practice.
Bi Kare said:ဒီမှာ Eng သင်တန်း ( ပညာဒါနဘဲဖြစ်ဖြစ်..လခနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ) ရှိရင်တက်ချင်ပါတယ်..သိတဲ့လူများရှိရင်ပြောပြပေးပါ. Basic Level တော့ရပါတယ်... Sing ရော Eng ပါ နှစ်မျိူးလုံး အားနည်းနေလို့ပါ.
Permalink Reply by Moe Kyaw Thu on September 19, 2010 at 11:56am @ Bi Kare,
Self-learning is good but it takes time and you need self-motivation.
One of the easier ways is to attend the class and learn fromaqualified teacher, if possible,anative speaker.
You can try at British council classes for adult learners
Permalink Reply by Bi Kare on September 20, 2010 at 8:49am ဖြေပေးတဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ...
Permalink Reply by yar yar on November 10, 2010 at 1:58pm sembawang ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပညာဒါနသင်တန်းတွေရှိပါတယ်။ City Hall က7လွှာမှာလဲရှိပါတယ်။ အလှူငွေတော့ထည့်ရပါတယ်။ လိပ်စာက #07-21, Peninsula Plaza ပါ။ ဖုံးနံပါတ်က ၉၀၉၈ ၀၀၅၇ ပါ။ ကျွန်တော်လဲပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့ language ပိုင်းကညံ့နေသေးလို့ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Permalink Reply by Bi Kare on November 10, 2010 at 4:45pm Yar Yar ရေ ကျေးဇူးပါနော်..
Permalink Reply by kyawwin on February 4, 2011 at 5:49pm ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပါအင်္ဂလိပ်စာကိုအရမ်းဝါသနာပါပါတယ်တတ်လဲတတ်ချင်ပါတယ်